Wararka inaga soo gaaraya degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in xiisad ay wali ka taagan tahay xuduuda Soomaaliya iyo Kenya wadaagaan gaar ahaan xadka Degmooyinka Balad Xaawo iyo Mandheera, iyadoo weli shacabka Soomaaliyeed ay ku banaanbaxayaan ciidamada Kenya ee halkaasi jooga.
Ciidamada Kenya oo wata dabaabaadka dagaalka ayaa gudaha usoo galay gudaha Balad Xaawo waxa ayna bur buriyeen guryo dad shacab lahaayeen, waxa ayna darbi ka dhisayaan gudaha xadka Soomaaliya.
Shacabka degmada Balad Xaawo oo ka careesan dhul boobka iyo bur burinta ay wadaan ciidamada Kenya ayaa bilaabay in dhagxaan kaga hortagaan ciidamada Kenya, waxa ayna shacabku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan dhul boobka Kenya wado.
Maamulka Gobolka Gedo ayaa sheegay in ciidamo katirsan Milatariga Soomaaliya u dirayaan xuduuda muranku ka taagan yahay si ay uga hortagaan dhul boobka ay wadaan ciidamada Milatariga Kenya.
Guddoomiye kuxigeenka amniga Gobolka Gedo Cusmaan Nuur Xaaji ayaa sheegay in ciidamada Kenya kusoo xadgudbeen dhulka Soomaaliya ayna bur buriyeen guryo dad shacab ah leeyihiin iyaga oo awood adeegsanaya.
Waxa uu sheegay in ciidamo la geenayo xadka ay dhul boobka ka wadaan Kenya si looga hortagao dhul boobka iyo bur burinta ay wadaan ciidamada Kenya, waxa uuna sheegay in ay u diyaar garoobayaan in ay iska difaacaan ciidamada xad gudubka wada ee Kenya.
March 25, 2018 Geesey
Kenya oo Cadaysay Inay Dhamaystirayso Derbiga ay ka Dhisayso Xuduuda Soomaaliya (VIDEO) January 29, 2018
Madaxweyne Farmaajo oo ka Qaybgalaya Caleemosaarka Madaxweyne Uhuru Kenyatta (VIDEO) November 28, 2017